ရာခိုင်နှုန်းများကို ရေးသားပုံ - Percent (ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် Percentage (ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြချက်) - Myanmar Network
ရာခိုင်နှုန်းများကို ရေးသားပုံ - Percent (ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် Percentage (ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြချက်)
Posted by Language Republic on May 21, 2012 at 14:51 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဦးစွာ အခေါ်အဝေါ်များ မှန်ကန်စေရန် ညှိနှိုင်းပါမည်။ အချို့အသုံးအနှုန်းများတွင် percent ရာခိုင်နှုန်းနှင့် percentage ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြချက် တို့ကို အလဲအလှယ် နှစ်သက်ရာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အခြေအနေနှင့် အသုံးပြုသော ဝေါဟာရ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်စေရန် အလွယ်ဆုံး ရွေးချယ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းမှာ ဂဏန်းနှင့် percent ကို တွဲသုံးပြီး ဂဏန်းမပါလျှင် percentage ကို သုံးရန်ဖြစ်ပါသည်။
• (ဂဏန်းနှင့် percent ကို တွဲသုံး) Forty percent of the chocolate was missing. ချောကလက် ၄၀ရာခိုင်နှုန်း ပျောက်နေသည်။
• (ဂဏန်းမပါလျှင် percentage) What percentage of the chocolate was missing? ချောကလက် ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်လောက်ပျောက်နေသလဲ။
Percent ဟု တွဲရေးမည်လား၊ Per Cent ဟု ခွဲရေးမည်လား။
အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းတွင် percent ဟု တစ်လုံးတည်း တွဲရေးလေ့ ရှိပါသည်။ ဗြိတိသျှ အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းတွင် per cent ဟု နှစ်လုံးခွဲ၍ ရေးလေ့ ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ဗြိတိန်တွင်လည်း တစ်လုံးတည်း တွဲရေးခြင်းများ ပိုမိုများပြားလာနေသည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ ဤစကားလုံး ဆင့်ကဲပြောင်းလဲ လာပုံမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ရာဂဏန်းအားဖြင့် "by the hundred" ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော လက်တင်စကားစု per centum မှ အစပြုပါသည်။ ထို့နောက် အနည်းငယ် per cent ဟု အင်္ဂလိပ်စာလုံး ၂လုံးအဖြစ် သုံးနှုန်းကြပါသည်။ ယခုအခါ အင်္ဂလိပ်စာလုံး တစ်လုံးတည်းအဖြစ် လက်ခံထားကြပါသည်။
အနည်းကိန်း (ဧက၀ုစ်) လား အများကိန်း (ဗဟုဝုစ်) လား။
ရာခိုင်နှုန်းများမှာ အနည်းကိန်း (ဧက၀ုစ်) လား အများကိန်း (ဗဟုဝုစ်) လားဟု စာရေးသူကို မေးမြန်း ကြပါသည်။ အသုံးအနှုန်းပေါ် မူတည်သည်ဟု ဖြေရပါမည်။ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါမှာ မကြာခဏ ယတိပြတ်သတ်မှတ်၍မရဘဲ အသုံးအနှုန်းပေါ် မူတည်၍ အမှန်အမှား ကွဲပြားသွားပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖော်ပြသည့် နာမ်ပေါ် မူတည်၍ အနည်းကိန်း အများကိန်း ဆုံးဖြတ်ပါ။ အနည်းကိန်းနာမ်၏ ရာခိုင်နှုန်းသည် အနည်းကိန်းဖြစ်ပြီး အများကိန်းနာမ်၏ ရာခိုင်နှုန်းသည် အများကိန်းဖြစ်ပါသည်။
သဒ္ဒါဝေါဟာရဖြင့်ဆိုပါက preposition နောက်မှလိုက်သော နာမ် object of the preposition ကို လိုက်၍ ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖော်ပြရာတွင် သုံးသော preposition မှာ of ဖြစ်ပါသည်။
Forty percent of the chocolate is missing.
ချောကလက် ၄၀ရာခိုင်နှုန်း ပျောက်နေသည်။ (ချောကလက်မှာ အနည်းကိန်းနာမ်ဖြစ်သောကြောင့် အနည်းကိန်းကြိယာ is ကို သုံးပါသည်။)
Forty percent of the chocolate chips are missing.
ချောကလက်ပြား ၄၀ရာခိုင်နှုန်း ပျောက်နေသည်။ (ချောကလက်ပြားမှာ အများကိန်းနာမ် ဖြစ်သောကြောင့် အများကိန်းကြိယာ are ကို သုံးပါသည်။)
ရာခိုင်နှုန်းနောက်တွင် preposition မပါခြင်း သို့မဟုတ် object of the preposition မပါခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ သဲလွန်စ ပျောက်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ object of the preposition ကို ထုတ်ဖော်ရေးသားမထားသော်လည်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်နေသလားဟု စိစစ်ပါ။ အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်သော နာမ်သည် အနည်းကိန်းဖြစ်ပါက အနည်းကိန်းကြိယာကို သုံးပြီး အများကိန်းဖြစ်ပါက အများကိန်း ကြိယာကို သုံးနိုင်ပါသည်။
The chocolate chips were pillaged. Forty percent were missing.
ချောကလက်ပြားများ အခိုးခံရသည်။ ၄၀ရာခိုင်နှုန်း ပျောက်နေသည်။
(ဒုတိယ၀ါကျတွင် Forty percent ဟုသာ ဆိုထားသော်လည်း chocolate chips များ၏ Forty percent ဟု အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သဖြင့် အများကိန်းကြိယာ were ကို သုံးပါသည်။)
ချောကလက် အခိုးခံရသည်။ ၄၀ရာခိုင်နှုန်း ပျောက်နေသည်။
(ဒုတိယ၀ါကျတွင် Forty percent ဟုသာ ဆိုထားသော်လည်း chocolate ၏ Forty percent ဟု အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သဖြင့် အနည်းကိန်းကြိယာ was ကို သုံးပါသည်။)
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် percent သည် အနည်းကိန်းနာမ် သို့မဟုတ် အများကိန်းနာမ်ကို ရည်ညွှန်းသည်ဟု ဖော်ထုတ်၍မရနိုင်လျှင် နှစ်သက်ရာ ကြိယာကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အလွန်လွယ်ကူပါသည်။
ရာခိုင်နှုန်းဖော်ပြချက် (percentage) ဟူသော စကားလုံးကို အသုံးပြုခြင်း
ရာခိုင်နှုန်းဖော်ပြချက် percentage ဟူသော စကားလုံးမှာ အနည်းငယ် ပိုမို ရှုပ်ထွေးပါသည်။ A percentage of ဟု ဆိုပါက နောက်မှလိုက်သော နာမ် noun ပေါ် မူတည်၍ အနည်းကိန်း အများကိန်း ခွဲရပါသည်။ The percentage of ဟု ဆိုပါက အမြဲတစေ အနည်းကိန်းသာဖြစ်ပါသည်။
ချောကလက်ပြားတွေ ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ဆိုပြီး ပျောက်နေတာ ရှိတယ်။
ပျောက်နေတဲ့ ချောကလက်ပြားတွေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းက ကြောက်ခမန်းလိလိဘဲ။
A percentage of ကို သုံးရာမှာ ၀ါကျရဲ့ ရှေ့ဆုံးမှာ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာလည်း အရေးကြီးတယ်။ ရှေ့ဆုံးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အနည်းကိန်း ကြိယာကိုသုံးရတယ်။
ချောကလက်ပြားတွေ ရာခိုင်နှုန်းအတော်များများ ပျောက်နေတယ်။
စာလုံးနဲ့ရေးမလား ဒါမှမဟုတ်သင်္ကေတနဲ့ ရေးမလား။
၀ါကျထဲတွင် ရာခိုင်နှုန်းများကို ထည့်သွင်းရေးသားရာ၌ ကိန်းဂဏန်းများကို စာဖြင့်မရေးဘဲ ဂဏန်းဖြင့် ရေးခြင်းက ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ၁၀ အောက် ကိန်းဂဏန်းများဖြစ်လျှင်လည်း ဂဏန်းဖြင့်သာ ရေးသင့်ပါသည်။ ချောကလက်ပြားများ ၅% ပျက်စီးကြောင်း ရေးသားလိုလျှင် ၅% ဟု ဂဏန်းဖြင့် ရေးပါ။ Five percent ဟု စာဖြင့် မရေးပါနှင့်။ ကိန်းဂဏန်းမရေးဘဲ စာဖြင့် ရေးသင့်သည့် တစ်ခုတည်းသော နေရာမှာ ၀ါကျအစနေရာ ဖြစ်ပါသည်။ ၀ါကျအစတွင် ကိန်းဂဏန်းဖြင့် မစသင့်ဟူသော စည်းမျဉ်းကို လိုက်နာရန်ဖြစ်ပါသည်။ (မှတ်ချက် - အချို့သော စာဟန်လမ်းညွှန်စာအုပ်များတွင ရာခိုင်နှုန်းကို ရေးသားရာ၌ ကိန်းဂဏန်းဖြင့် ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ဖြစ်စေ ရေးသားနိုင်သည်ဟု ဆိုကြပါသည်။)
ထို့နောက် percent ဟု စာဖြင့်ရေးသားမည်လား၊ % ဟု သင်္ကေတဖြင့် ရေးသားမည်လား ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။ ကိန်းဂဏန်းများ ရေးသားသည့် အထွေထွေစည်းမျဉ်းကဲ့သို့ပင် နည်းပညာ သို့မဟုတ် သိပ္ပံ စာစောင်၊ စာတမ်း ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါက သင်္ကေတဖြင့် ရေးသားသင့်ပါသည်။ ကိန်းဂဏန်းအသုံးနည်းသော စာအမျိုးအစားဖြစ်ပါက percent ဟု စာဖြင့်ရေးသားနိုင်ပါသည်။ အဆုံးစွန်တွင် မိမိနှစ်သက်ရာ ဟန်ကို ရွေးချယ်ရေးသားနိုင်သည်ဟု ဆိုရပါမည်။ နှစ်သက်ရာဟန်ကို ရွေးချယ်ပြီးပါက တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကိန်းဂဏန်းအတွက်သာ စာဖြင့် မရေးသားဘဲ ဂဏန်းဖြင့် ရေးသားရန် ဖြစ်ပါသည်။
၁ ထက်နည်းသော ရာခိုင်နှုန်းအတွက် ဒဿမရှေ့တွင် သုညထည့်ရန် မမေ့ပါနှင့်။ .၂% ဟု မရေးဘဲ ၀.၂% ဟု ရေးပါ။ ရာခိုင်နှုန်း မဟုတ်သည့် ၁ ထက်နည်းသော ဂဏန်းများကိုလည်း ဤအတိုင်းပင် ရေးရပါသည်။ သုညမထည့်ပါက ဒဿမအမှတ်ကို မမြင်ဘဲ မျက်စိလျှမ်းသွားနိုင်ခြင်းကြောင့် သုညထည့်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အလိမ်အညာများ၊ ဆိုးဝါးသော အလိမ်အညာများနှင့် ရာခိုင်နှုန်းများ
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းများ တွက်ချက်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရာတွင် သိထားသင့်သော အချက်အချို့ ရှိပါသည်။
ပထမဦးစွာ ၁၀၀% ထက် ပိုလွန်၍ မလျော့နည်းနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ ၁၀၀% မရှိတော့လျှင် ဘာမျှ မကျန်တော့ပါ။ ဈေးနှုန်း သို့မဟုတ် အခြားတစ်စုံတစ်ခုသည် ၁၅၀% လျော့နည်းကျဆင်းသွားသည်ဟု မည်သည့်အခါမျှ မရေးသားမိပါစေနှင့်။ မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဒုတိယအချက်မှာ ဆေးဝါးကုသမှု၊ နိုင်ငံရေး သို့မဟုတ် ငွေကြေးသတင်းများကို ဖတ်ရှုသောအခါ ရာခိုင်နှုန်း အားဖြင့် များသော်လည်း စုစုပေါင်း တိုးမြင့်မှု သို့မဟုတ် လျော့ကျမှုမှာ အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတိပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ ရှားပါးသော ရောဂါတစ်ခု (ဆိုကြပါစို့ တွေ့ကရာ နာမည်တစ်ခု ဖန်တီးလိုက်မည် floogety flork ရောဂါ) နှစ်စဉ် ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ၅၀% တိုးလာသည်ဟု ဆိုရာ၌ လူ ၁၀၀၀၀၀ လျှင် ၁ဦး ဖြစ်ပွားရာမှ လူ ၁၀၀၀၀၀ လျှင် ၁.၅ ဦး ဖြစ်ပွားသည်ဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ် တိုးလာသော အရေအတွက်ထက် ၅၀% ဟူသော အသုံးအနှုန်းက ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းများသည် အမြဲတစေ နားလည်မှု လွဲမှားစေခြင်း မဟုတ်ပါ။ သို့သော် နားလည်မှု လွဲမှားနိုင်သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေကို သတိပြုရပါမည်။
ဦးစှာ အချေါအဝျေါမြား မှနျကနျစရေနျ ညှိနှိုငျးပါမညျ။ အခြို့အသုံးအနှုနျးမြားတှငျ percent ရာခိုငျနှုနျးနှငျ့ percentage ရာခိုငျနှုနျးဖွငျ့ ဖျောပွခကျြ တို့ကို အလဲအလှယျ နှဈသကျရာ အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ သို့ရာတှငျ အခွအေနနှေငျ့ အသုံးပွုသော ဝေါဟာရ အံဝငျခှငျကြ ဖွဈစရေနျ အလှယျဆုံး ရှေးခယျြနိုငျသညျ့ နညျးလမျးမှာ ဂဏနျးနှငျ့ percent ကို တှဲသုံးပွီး ဂဏနျးမပါလြှငျ percentage ကို သုံးရနျဖွဈပါသညျ။
• (ဂဏနျးနှငျ့ percent ကို တှဲသုံး) Forty percent of the chocolate was missing. ခြောကလကျ ၄၀ရာခိုငျနှုနျး ပြောကျနသေညျ။
• (ဂဏနျးမပါလြှငျ percentage) What percentage of the chocolate was missing? ခြောကလကျ ရာခိုငျနှုနျး ဘယျလောကျပြောကျနသေလဲ။
Percent ဟု တှဲရေးမညျလား၊ Per Cent ဟု ခှဲရေးမညျလား။
အမရေိကနျအင်ျဂလိပျအသုံးအနှုနျးတှငျ percent ဟု တဈလုံးတညျး တှဲရေးလေ့ ရှိပါသညျ။ ဗွိတိသြှ အင်ျဂလိပျအသုံးအနှုနျးတှငျ per cent ဟု နှဈလုံးခှဲ၍ ရေးလေ့ ရှိပါသညျ။ သို့ရာတှငျ ဗွိတိနျတှငျလညျး တဈလုံးတညျး တှဲရေးခွငျးမြား ပိုမိုမြားပွားလာနသေညျဟု ဆိုကွပါသညျ။ ဤစကားလုံး ဆငျ့ကဲပွောငျးလဲ လာပုံမှာ စိတျဝငျစားဖှယျဖွဈပါသညျ။ ရာဂဏနျးအားဖွငျ့ "by the hundred" ဟု အဓိပ်ပာယျရသော လကျတငျစကားစု per centum မှ အစပွုပါသညျ။ ထို့နောကျ အနညျးငယျ per cent ဟု အင်ျဂလိပျစာလုံး ၂လုံးအဖွဈ သုံးနှုနျးကွပါသညျ။ ယခုအခါ အင်ျဂလိပျစာလုံး တဈလုံးတညျးအဖွဈ လကျခံထားကွပါသညျ။
အနညျးကိနျး (ဧကဝုဈ) လား အမြားကိနျး (ဗဟုဝုဈ) လား။
ရာခိုငျနှုနျးမြားမှာ အနညျးကိနျး (ဧကဝုဈ) လား အမြားကိနျး (ဗဟုဝုဈ) လားဟု စာရေးသူကို မေးမွနျး ကွပါသညျ။ အသုံးအနှုနျးပျေါ မူတညျသညျဟု ဖွရေပါမညျ။ အင်ျဂလိပျသဒ်ဒါမှာ မကွာခဏ ယတိပွတျသတျမှတျ၍မရဘဲ အသုံးအနှုနျးပျေါ မူတညျ၍ အမှနျအမှား ကှဲပွားသှားပါသညျ။ ရာခိုငျနှုနျးကို ဖျောပွသညျ့ နာမျပျေါ မူတညျ၍ အနညျးကိနျး အမြားကိနျး ဆုံးဖွတျပါ။ အနညျးကိနျးနာမျ၏ ရာခိုငျနှုနျးသညျ အနညျးကိနျးဖွဈပွီး အမြားကိနျးနာမျ၏ ရာခိုငျနှုနျးသညျ အမြားကိနျးဖွဈပါသညျ။
သဒ်ဒါဝေါဟာရဖွငျ့ဆိုပါက preposition နောကျမှလိုကျသော နာမျ object of the preposition ကို လိုကျ၍ ဆုံးဖွတျပါသညျ။ ရာခိုငျနှုနျးဖျောပွရာတှငျ သုံးသော preposition မှာ of ဖွဈပါသညျ။
ခြောကလကျ ၄၀ရာခိုငျနှုနျး ပြောကျနသေညျ။ (ခြောကလကျမှာ အနညျးကိနျးနာမျဖွဈသောကွောငျ့ အနညျးကိနျးကွိယာ is ကို သုံးပါသညျ။)
ခြောကလကျပွား ၄၀ရာခိုငျနှုနျး ပြောကျနသေညျ။ (ခြောကလကျပွားမှာ အမြားကိနျးနာမျ ဖွဈသောကွောငျ့ အမြားကိနျးကွိယာ are ကို သုံးပါသညျ။)
ရာခိုငျနှုနျးနောကျတှငျ preposition မပါခွငျး သို့မဟုတျ object of the preposition မပါခွငျးလညျး ဖွဈနိုငျပါသညျ။ ထိုအခါ သဲလှနျစ ပြောကျဆုံးသှားမညျဖွဈပါသညျ။ object of the preposition ကို ထုတျဖျောရေးသားမထားသျောလညျး အဓိပ်ပာယျသကျရောကျနသေလားဟု စိစဈပါ။ အဓိပ်ပာယျ သကျရောကျသော နာမျသညျ အနညျးကိနျးဖွဈပါက အနညျးကိနျးကွိယာကို သုံးပွီး အမြားကိနျးဖွဈပါက အမြားကိနျး ကွိယာကို သုံးနိုငျပါသညျ။
ခြောကလကျပွားမြား အခိုးခံရသညျ။ ၄၀ရာခိုငျနှုနျး ပြောကျနသေညျ။
(ဒုတိယဝါကတြှငျ Forty percent ဟုသာ ဆိုထားသျောလညျး chocolate chips မြား၏ Forty percent ဟု အဓိပ်ပာယျသကျရောကျသဖွငျ့ အမြားကိနျးကွိယာ were ကို သုံးပါသညျ။)
ခြောကလကျ အခိုးခံရသညျ။ ၄၀ရာခိုငျနှုနျး ပြောကျနသေညျ။
(ဒုတိယဝါကတြှငျ Forty percent ဟုသာ ဆိုထားသျောလညျး chocolate ၏ Forty percent ဟု အဓိပ်ပာယျသကျရောကျသဖွငျ့ အနညျးကိနျးကွိယာ was ကို သုံးပါသညျ။)
နောကျဆုံးအနဖွေငျ့ percent သညျ အနညျးကိနျးနာမျ သို့မဟုတျ အမြားကိနျးနာမျကို ရညျညှနျးသညျဟု ဖျောထုတျ၍မရနိုငျလြှငျ နှဈသကျရာ ကွိယာကို အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ အလှနျလှယျကူပါသညျ။
ရာခိုငျနှုနျးဖျောပွခကျြ (percentage) ဟူသော စကားလုံးကို အသုံးပွုခွငျး
ရာခိုငျနှုနျးဖျောပွခကျြ percentage ဟူသော စကားလုံးမှာ အနညျးငယျ ပိုမို ရှုပျထှေးပါသညျ။ A percentage of ဟု ဆိုပါက နောကျမှလိုကျသော နာမျ noun ပျေါ မူတညျ၍ အနညျးကိနျး အမြားကိနျး ခှဲရပါသညျ။ The percentage of ဟု ဆိုပါက အမွဲတစေ အနညျးကိနျးသာဖွဈပါသညျ။
ခြောကလကျပွားတှေ ရာခိုငျနှုနျးဘယျလောကျဆိုပွီး ပြောကျနတော ရှိတယျ။
ပြောကျနတေဲ့ ခြောကလကျပွားတှရေဲ့ ရာခိုငျနှုနျးက ကွောကျခမနျးလိလိဘဲ။
A percentage of ကို သုံးရာမှာ ဝါကရြဲ့ ရှဆေုံ့းမှာ ဟုတျမဟုတျဆိုတာလညျး အရေးကွီးတယျ။ ရှဆေုံ့းမှာ မဟုတျဘူးဆိုရငျ အနညျးကိနျး ကွိယာကိုသုံးရတယျ။
ခြောကလကျပွားတှေ ရာခိုငျနှုနျးအတျောမြားမြား ပြောကျနတေယျ။
စာလုံးနဲ့ရေးမလား ဒါမှမဟုတျသင်ျကတေနဲ့ ရေးမလား။
ဝါကထြဲတှငျ ရာခိုငျနှုနျးမြားကို ထညျ့သှငျးရေးသားရာ၌ ကိနျးဂဏနျးမြားကို စာဖွငျ့မရေးဘဲ ဂဏနျးဖွငျ့ ရေးခွငျးက ပိုမိုကောငျးမှနျပါသညျ။ ၁၀ အောကျ ကိနျးဂဏနျးမြားဖွဈလြှငျလညျး ဂဏနျးဖွငျ့သာ ရေးသငျ့ပါသညျ။ ခြောကလကျပွားမြား ၅% ပကျြစီးကွောငျး ရေးသားလိုလြှငျ ၅% ဟု ဂဏနျးဖွငျ့ ရေးပါ။ Five percent ဟု စာဖွငျ့ မရေးပါနှငျ့။ ကိနျးဂဏနျးမရေးဘဲ စာဖွငျ့ ရေးသငျ့သညျ့ တဈခုတညျးသော နရောမှာ ဝါကအြစနရော ဖွဈပါသညျ။ ဝါကအြစတှငျ ကိနျးဂဏနျးဖွငျ့ မစသငျ့ဟူသော စညျးမဉျြးကို လိုကျနာရနျဖွဈပါသညျ။ (မှတျခကျြ - အခြို့သော စာဟနျလမျးညှနျစာအုပျမြားတှင ရာခိုငျနှုနျးကို ရေးသားရာ၌ ကိနျးဂဏနျးဖွငျ့ ဖွဈစေ၊ စာဖွငျ့ဖွဈစေ ရေးသားနိုငျသညျဟု ဆိုကွပါသညျ။)
ထို့နောကျ percent ဟု စာဖွငျ့ရေးသားမညျလား၊ % ဟု သင်ျကတေဖွငျ့ ရေးသားမညျလား ဆုံးဖွတျရပါမညျ။ ကိနျးဂဏနျးမြား ရေးသားသညျ့ အထှထှေစေညျးမဉျြးကဲ့သို့ပငျ နညျးပညာ သို့မဟုတျ သိပ်ပံ စာစောငျ၊ စာတမျး ရေးသားခွငျး ဖွဈပါက သင်ျကတေဖွငျ့ ရေးသားသငျ့ပါသညျ။ ကိနျးဂဏနျးအသုံးနညျးသော စာအမြိုးအစားဖွဈပါက percent ဟု စာဖွငျ့ရေးသားနိုငျပါသညျ။ အဆုံးစှနျတှငျ မိမိနှဈသကျရာ ဟနျကို ရှေးခယျြရေးသားနိုငျသညျဟု ဆိုရပါမညျ။ နှဈသကျရာဟနျကို ရှေးခယျြပွီးပါက တဈညီတဈညှတျတညျး အသုံးပွုရနျဖွဈပါသညျ။ ကိနျးဂဏနျးအတှကျသာ စာဖွငျ့ မရေးသားဘဲ ဂဏနျးဖွငျ့ ရေးသားရနျ ဖွဈပါသညျ။
၁ ထကျနညျးသော ရာခိုငျနှုနျးအတှကျ ဒဿမရှတှေ့ငျ သုညထညျ့ရနျ မမပေ့ါနှငျ့။ .၂% ဟု မရေးဘဲ ဝ.၂% ဟု ရေးပါ။ ရာခိုငျနှုနျး မဟုတျသညျ့ ၁ ထကျနညျးသော ဂဏနျးမြားကိုလညျး ဤအတိုငျးပငျ ရေးရပါသညျ။ သုညမထညျ့ပါက ဒဿမအမှတျကို မမွငျဘဲ မကျြစိလြှမျးသှားနိုငျခွငျးကွောငျ့ သုညထညျ့ရခွငျးဖွဈပါသညျ။
အလိမျအညာမြား၊ ဆိုးဝါးသော အလိမျအညာမြားနှငျ့ ရာခိုငျနှုနျးမြား
နောကျဆုံးအနဖွေငျ့ ရာခိုငျနှုနျးမြား တှကျခကျြခွငျးနှငျ့ အဓိပ်ပါယျကောကျယူခွငျးတို့ ပွုလုပျရာတှငျ သိထားသငျ့သော အခကျြအခြို့ ရှိပါသညျ။
ပထမဦးစှာ ၁၀၀% ထကျ ပိုလှနျ၍ မလြော့နညျးနိုငျသညျကို သတိပွုပါ။ ၁၀၀% မရှိတော့လြှငျ ဘာမြှ မကနျြတော့ပါ။ ဈေးနှုနျး သို့မဟုတျ အခွားတဈစုံတဈခုသညျ ၁၅၀% လြော့နညျးကဆြငျးသှားသညျဟု မညျသညျ့အခါမြှ မရေးသားမိပါစနှေငျ့။ မဖွဈနိုငျပါ။
ဒုတိယအခကျြမှာ ဆေးဝါးကုသမှု၊ နိုငျငံရေး သို့မဟုတျ ငှကွေေးသတငျးမြားကို ဖတျရှုသောအခါ ရာခိုငျနှုနျး အားဖွငျ့ မြားသျောလညျး စုစုပေါငျး တိုးမွငျ့မှု သို့မဟုတျ လြော့ကမြှုမှာ အနညျးငယျမြှသာ ဖွဈနိုငျကွောငျး သတိပွုရနျဖွဈပါသညျ။ ဥပမာ ရှားပါးသော ရောဂါတဈခု (ဆိုကွပါစို့ တှကေ့ရာ နာမညျတဈခု ဖနျတီးလိုကျမညျ floogety flork ရောဂါ) နှဈစဉျ ဖွဈပှားမှုနှုနျး ၅၀% တိုးလာသညျဟု ဆိုရာ၌ လူ ၁၀၀၀၀၀ လြှငျ ၁ဦး ဖွဈပှားရာမှ လူ ၁၀၀၀၀၀ လြှငျ ၁.၅ ဦး ဖွဈပှားသညျဟု ဆိုလိုခွငျး ဖွဈနိုငျပါသညျ။ အမှနျတကယျ တိုးလာသော အရအေတှကျထကျ ၅၀% ဟူသော အသုံးအနှုနျးက ကွောကျမကျဖှယျရာ ဖွဈနနေိုငျပါသညျ။ ရာခိုငျနှုနျးမြားသညျ အမွဲတစေ နားလညျမှု လှဲမှားစခွေငျး မဟုတျပါ။ သို့သျော နားလညျမှု လှဲမှားနိုငျသညျ့ ဖွဈနိုငျခွကေို သတိပွုရပါမညျ။
Permalink Reply by etone on May 21, 2012 at 15:47
အလွန်ဗဟုသုတရတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ ။ ရေးသား ဖော်ပြသူကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော် ။
Permalink Reply by Aye Sandar Phyo on May 21, 2012 at 16:34
thanks so much for ur sharing
Permalink Reply by myomyintway on May 21, 2012 at 17:00
Permalink Reply by Naung Naung on May 21, 2012 at 18:04
thanks for sharing & sent me more knowledge
Permalink Reply by Jenny Chan on May 21, 2012 at 19:26
I appreciate your post. Thank you very much.
Permalink Reply by theinthansukyaw on May 21, 2012 at 20:27
Permalink Reply by Su Theint on May 22, 2012 at 10:03
I get many knowledge,thank u so much.
Permalink Reply by Zaw Win on May 22, 2012 at 13:09
I appreciate 100 percent to you.
Permalink Reply by win win shwe on May 23, 2012 at 14:43
Permalink Reply by 1p973us0st46a on May 24, 2012 at 18:21
Permalink Reply by Bo Swe on May 25, 2012 at 22:31
100% thanks giving your knowledge,
Permalink Reply by columbanlasa on June 1, 2012 at 14:14
ဟုတ်ကဲ့ နားလည်သွားပါပြီ။ ကျေးဇူးပဲခင်ဗျာ။